वीपीमा कोरोना संक्रमित एक महिलाको मृत्यु, सात जना डिस्चार्ज भए - ePosttimes
Home१ नम्बर प्रदेशवीपीमा कोरोना संक्रमित एक महिलाको मृत्यु, सात जना डिस्चार्ज भए
२९ श्रावण २०७७, बिहीबार ११:५८ १ नम्बर प्रदेश, समाचार, हाम्रो सरोकार 0
साउन-२९ धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारार्थ भर्ना भएका सात जना विरामी निको भई डिस्चार्ज भएका छन् भने कोरोना संक्रमित एक वृद्ध महिलाको मृत्यु भएको छ ।
प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाका अनुसार धनुषाको ढल्केवर ७ की ८५ बर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो । योसँगै वीपी प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुगेको छ । उनी साउन २६ गते प्रतिष्ठानमा उपचारार्थ भर्ना भएका थिए।
प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार धनुषाको निजी हस्पिटलले निमोनिया भनेर रिफर गरेको थियो । मृतकलाई ज्वारो थियो भने श्वास फेर्न पनि गाह्रो थियो । ‘हिजो बुधबार राती नै उहाँको निधन भएको हो, र आज बिहान शव व्यवस्थापन गर्न लगिसकेको प्रवक्ता डा. सापकोटाले बताए ।
449900cookie-checkवीपीमा कोरोना संक्रमित एक महिलाको मृत्यु, सात जना डिस्चार्ज भएyes
संकटसंग जुध्न प्रदेश १ का राजनीतिक दल एक ठाउँ, लकडाउन पालना गर्न आह्वान राहात वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईको आग्रह आइसोलेसन बेडको मापदण्डमा प्रदेश सरकारको कडाई, सुन्दरहरैंचामा संख्या घटाइयो प्रदेश १ मा कोरोना टेस्ट छरितो विधिबाट हुदै, हालसम्म ८ सय ३९ नमुना संकलन, सबै रिपोर्ट नेगेटिभ उदयपुरमा थप ८ जनामा कोरोना संक्रमणको आशंका थप दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ४७ पुग्यो प्रदेश १ मा द्रूत गतिमा परीक्षण हुँदै, हालसम्म ७ हजार २ सय ७२ को परिक्षण थप ५२५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, उपत्यकामा १२७